አዴፓ+አብን+ኢዜማ+ዳንኤል ክብረት+ ባለአደራ+….የልሙጡ ባንድራ አፍቃሪዎች (አንድ ሀገር አንድ ህዝብ አንድ ቋንቋ አንድ ሀይማኖት አንድ ባንድራ….የነፍጠኛ ስርዓት አፍቃሪ ….)። - Kichuu
HomeAfaan OromooNewsአዴፓ+አብን+ኢዜማ+ዳንኤል ክብረት+ ባለአደራ+….የልሙጡ ባንድራ አፍቃሪዎች (አንድ ሀገር አንድ ህዝብ አንድ ቋንቋ አንድ ሀይማኖት አንድ ባንድራ….የነፍጠኛ ስርዓት አፍቃሪ ….)።
የሁሉም አቋም ማጠቃለያ (አንድ ላይ ሲጠቃለል) አዴፓ+አብን+ኢዜማ+ዳንኤል ክብረት+ ባለአደራ+….የልሙጡ ባንድራ አፍቃሪዎች (አንድ ሀገር አንድ ህዝብ አንድ ቋንቋ አንድ ሀይማኖት አንድ ባንድራ….የነፍጠኛ ስርዓት አፍቃሪ ….)።
Barreeffama Malkaa Hawaas ganama barreesse:Baaldiraas moo’atee jiraa?
Namoonni gariin Iskindir Naggaa “moo’eera” jedhanii haasawaa jiru. Tokko tokko “OPDOn nu salphifte rabbi isii haa salphisu” jedhee abaaraa jira. Kuun wal ajiifataa jira. Kuun ammoo dhama’ee harka dhawaa jira. Amaartichi moo’atee jiraa garuu? Lolli amma argaa jirru kun “lola mootummaafi Iskinder jidduutti deema jiru” jennee yoo ilaalle Iskindir moo’ataee jira. Ni “zarrare” (gombise)!Akkamitti? Dhimmi isaa ajandaa (agenda) akka ta’u godhee jira. Xiyyeeffannoo ummata biyyafi miidiyaa addunyaa tokko tokkos argatee jira. Sanuu wayita ummanni waa’ee badhaasa Abiyyiif mirqaanaa jirutti inni mirqaansuu san keessa qoree kaa’e!
Dubbiin garuu bifa biraas ni qabdi (other side of the story). Lolli deemaa jiru lola Iskindiriifi mootummaa OPDO gidduu osoo hintaane lola qabbanaawaa (Cold War) OPDO fi garee Amaaraa (ADP+ABiN+ abbootii qabeenyaa + hayyoota (elites)) gidduutti deemaa jiru. Iskindir ergamaafi dhimmaa garee lammaffaati jechuudha. Lolli qabbanaawaan (Cold War) OPDO fi jara kanaa yoom akka jalqabame beekuu baannus hamma tokko of duuba deebinee yaadachuun gaariidha.
1. Asaamminnon yeroo gaafa waa’ee waggoota 500 dubbatu waa’ee siyaasaa Oromoo ammaa (kan OPDOn hoogganamuu) kana haasa’uu isaati. Mootummaan kun “keenya miti. Nu miidha. Olaantummaa keenya nurraa fudhate. Olaantummaan nuun mala. Kanaafuu bu’uu qaba” yaada jedhu qaba. Yaada kana Habashoonni Immiiyyee hundinuu irratti waliigalu. Kanumaafis qophaa’aa turan. Ammas itti jiru.
2.Duuti Asaamminoofi kan hoggantoota biroollee dhimmuma kanaan walqabata. Namoonni du’an sun adeemsa irratti wal haadhaban malee ilaalcha siyaasa Oromoof qaban irratti garaagarummaa tokkollee hinqaban. ADP dabalatee namoonni muraasni ifatti bahanii “ofumaa wal ajjeefne” haa jedhan malee garaa jalaan wanti jarri walitti himan waan biraati. Shira Abiyyiifi Wayyaaneetin ajjeefamne yaada jedhu.
3. ADPn OPDO wajjiin dhimma Finfinnee irratti hedduu wal dhaban. Walii galuu dadhabnaanis hedduun haala ifa ta’eefi haala garaa jalaatiin baay’ee wal irratti hojjatanii jiru. Keessattu dhimma werara lafaa Finfinnee, naannawa Finfinnee Koondomiiniyemii irratti. ADPn namoota akka Iskindir fi kan biroo, midiyaa Habashaa garagaraatiif odeeffannoo sensitive ta’e dabarsee kennuun OPDOfi ummata Oromoo irratti ollolli akka oofamu taasisee jira
4. Gareen ADP Finfinnee kan Indaawwaq Abbixeen durfamu ibsa ifaan ifatti OPDO tuffate baasee ture.
5. Warri Ortodoksii magaalota naannoo Amaaraa hedduu keessatti hiriirri akka bahan kan kakaaseefi kan deeggarsa laateef garee Amaaraati. Kun ADP, ABiN, abbootii qabeenyaa dabalata fa’a dabalata. Hiriirri Ortodoksii kun hiriira siyaasaa Oromoo akkasumas hoggansa OPDO irratti xiyyeeffate ta’uun ifa.
6. Dhimma Qimantii fi kan Oromoo Walloo irratti ADPn OPDOfi miidiyaa Oromoo himatu. Rakkina kana duuba warra OPDOtu jira jedhanii amanu.
7. Hiriira Iskindir Naggaa waamu hedduu isaa garee siyaasaa Amaaraatu qindeessa. Mallaqaafi lojistikiidhaan kan gargaaru jara. Kan ammaa kanas jaruma. Beekumsaafi fedhii ADPn ala konkolaataan 100 ol naannoo Amaaraa deemee nama gara Finfinnee fe’uu hindanda’u. Waa’ee namoota Goojjam irraa garaa FF fe’amnii waan Taayyee Danda’aa dhiyeenya kana barreesse ni yaadattuu?
OPDOn tarkaanfii akkamii fidhatte?
OPDOn yeroo dheeraa rafaa baate. Erga hirribaa kaatee ammoo “erguu hinga’an. Too’annoo keenya jalaa hinba’an” jettee rincicaa turte. Amma erga Habashaan Abiyyi irratti xiyyeeffattee as waan sirritti dammaqaa jirtu fakkaata.
1. Ibsa “Finfinneen tan Oromooti” jedhu barreessite. Jecha “nafxanya” jedhu fayyadamuun ummanni akka jala hiriiru yaalii goote.
2. Irreechi akka Finfinneetti qophaawu goote. Kun akka warreen Habashaan baanan “humana ofii agarsiisuufi.” Kana Ummanni Oromos ni deeggara.
2. Miseensota ADP fi ABiN akkasumas abbotii qabeenyaa isaanii muraasa fi namoota miidiyaa Asraat keessa jiran mana hidhaatti naqxe.
3. Guyyaa Irreechaa akka karaan Dabra Birhaan cufamu ijoolleetti funyaan butte.
4. Har’aafi kalee ammoo ijoollee Salaaleetti ija buttee akka Amaarri kumaatamaan lakkaa’amu ala bulu goote. Warra Baaldiraas Finfinnee keessatti hiite.
5. Hunda dubbachuun gaarii miti garii bira darbuu wayya (political taboo)!
OPDOfi ADPn jalqaba harka namaa keessaan (proxy) wal lolaa turan. Amma erga Shimaallis “nafxanyaa”jedhe ammoo kaadiroonni isaanii kan akka Taayyee Danda’aafi Assamaaganyi Asras ifumaan ifatti walitti bahaa jiran. Poolisoota Oromiyaa warreen dhagaa karaa Goojjam cufe bira dhaabbatan san argitanii?
Amma as geenyee jirra. Lola keessa jirra. Lola garee Oromoo OPDOn durfamuufi kan garee Amaaraa ADPn durfamu walakkaa jirra. Sababni isaa ammoo siyaasaadha. Jibba gareen Amaaraa siyaasaa Oromoo irraa qabdu mul’isa. Hawwii jarri “Oromoo hoggansa siyaasaa irraa akka salphaatti ni ariina” jedhu if keessaa qaba. So, dubbii akkanatti bal’ifnee yoo ilaalle lolli deemaa jiru lola mootummaa fi Iskindir qofa jidduutti deemaa jiruu miti. Sanii oli. Ammas hinxummuramne. Kan moo’es hinjiru. Waluma rigaa jiru. Wanti haarofti mul’ataa jiru OPDOn ifaan ifatti tarkaanfii ofirraa dhoorguu fudhachuu jalqabuu isiiti. Gaafa namatti qajeelte akkanuma!
Ummanni hoo maal gochuu qaba? Hedduun keenya OPDO hin jaalannu. Garuu lolli garee Amaaraatin isiiirratti adeemsifamu ammoo lola Oromoo irratti adeemsifamu ta’uu hubannee hordofuu qabna. OPDO bakka qeequu qabnu irratti qeeqnee bakka deeggaruu qabnu irratti ammoo deeggaruun dirqama. Quba walqabaachuun waajiba. Gaaffiin Oromoo deebi’uu qaba. Diinni Oromoo akka hinfayyinetti cabuu qaba!
Isin hoo maal jettu?
#Hariiroo Asmaariifi Dooftora OPDOn Dooftora jettee🤣🤣🤣👇
Gurbaa farriftuu Ekeraa jaarraa 8ffaa fakkaattu kanammoo warri OMN daldala shira isaaniitiif wacabbarsiisaa turan. Yuuyyee dantaan burkaajesse kanatu ejjennooshee wallaalte. Inni dhumaa jirus keenya; inni ajjeesus keenyadha jette. Dr. Abiy Xiyyaaraan fixuu hinwallaallemmoo jette. Ani kanin jedhuumee. Hici. Hinjedhu😀‼🤪
ኢውነተኛ ታርክ: የነፍጠኛና የቅጫሞች ምንልክያዊያን ግፍ በታላቁ የዋሃ ኦርሞ ህዝብ ላይ። በደንብ ኣዳምጥ ኦሮሞ;ቀሮ ስራህን ቀጥልበት!